Russia sele esenziwe lula inkqubo ye yokufumana ubumi kuba Ukrainians - Russia iindaba namhlanje
Russia sele esenziwe lula inkqubo ye yokufumana ubumi kuba Ukrainians — Russia iindaba namhlanje
Urhulumente Duma yamkelwa umthetho oyilwayo ukuze amise esenziwe lula inkqubo kuba yokufumana ubumi nokuhlala amaphepha-mvume kuba Ukrainians. Kanjalo ikuvumela ukuba ii isigqibo malunga acquisition ka-Russian ubumi convicted ka-terrorism kwaye extremism, kwaye introduces inkqubo kuba isifungo lobumi. Ekhoyo umthetho i-inani iimfuno kuba bamazwe angaphandle kwaye stateless abantu wishing ukufumana Russian lobumi.
Isigqibo kwi acquisition lobumi ye-isirashiya ngu ngokulawulwa ukucinywa ukuba umfaki-sicelo sele zichaziwe ubuxoki amaxwebhu okanye ngokuqinisekileyo ubuxoki data, eya kuba iqinisekiswa ngaphakathi enkundleni. Lo mthetho uyilwayo useka ukuba unxibelelwano ka-ubuxoki ulwazi basenokuba kakubi ngumntu ye-obligation ukuthobela Russian umthetho, ukuba injongo acquisition ka-nationality kwakukho imisebenzi ngokuchasene-siseko faka isirashiya. Nayo le committing a ulwaphulo-mthetho komhlaba kwaye zezikomiti ulwaphulo-mthetho i-terrorist okanye extremist. Xa ihlala isebenza inkundla isivakalisi kuba committing ezi yolwaphulo-mthetho izakuba emidlalo kuba ukucinywa lomthetho isigqibo malunga acquisition lobumi. Nangona kunjalo, kufunyaniswe ukuba ukucinywa ka-izigqibo kwi ngokumnika Russian ubumi kwabo convicted ka-terrorism kwaye extremism avume isicelo amaqabane nabantwana ye-offender. Ezi zihlomelo kwindawo yesibini ka-ufundo lo mthetho usayilwayo kwaquka umbhalo isifungo lobumi. Kwi umbhalo isifungo ukususela ekuqalekeni juni, iqela le deputies, end ekhutshwe uxwebhu ukuba waba uxhaswe iinkokeli bonke factions.»Mna (igama elipheleleyo) voluntarily kwaye knowingly ukuthathela ubumi ye-isirashiya ndiyafunga ukuba awuhlonele umgaqo-Siseko kunye nomthetho we-isirashiya, amalungelo nenkululeko yayo abemi, ukwenza imisebenzi ye-ummi ye-isirashiya kuba inzuzo urhulumente kwaye society ukukhusela inkululeko kwaye ukuzimela ye-isirashiya, ibe loyal ukuba i-Russia, intlonipho yayo inkcubeko, imbali kwaye imicimbi yayo», wathi kwi-umbhalo isifungo. I-incwadi yokundwendwela ye-ummi ye-isirashiya kuya kukhutshwa ngoko nangoko emva ukuthathela isifungo. Lo mthetho usayilwayo umisela ukuba umgaqo-nkqubo we ukuthathela isifungo lobumi ye-isirashiya uza ilawulwe ngumthetho ye-ofisi kamongameli ummiselo. Kanjalo, lo mthetho usayilwayo introduces izibonelelo okokuba ngokwenza lula inkqubo yokufumana ubumi kwaye imvume yokuba ngumhlali kule isirashiya kuba Ukrainians. Ngaphambi koko, deputies yombuso Duma wachaza ukuba i-ukrainian abemi wishing to renounce * kweli lizwe kwaye ukuba bathenge ubumi ye-isirashiya, kukho iingxaki kunye ithatha kuyimfuneko amaxwebhu ukusuka linalo igunya abasemagunyeni ka-Ukraine besomeleza zabo isicelo waiver okhoyo i-ukrainian lobumi.
Ukusombulula le ngxaki kwaye siqulunqe ehambelana izilungiso kuwo
Ibonelela ukuba abemi ka-Ukraine wishing ukufumana ubumi ye-isirashiya, umqondiso a ingxelo renouncing i-i-ukrainian ubumi, uxwebhu esikhutshwe lilizwe notary, omnye khuphela ihlala kwi-migration iinkonzo isirashiya, okwesibini uya Ukraine, wathi kwentloko Duma Ikomiti kwi umthetho Pavel Krasheninnikov. Wathi ukuba enjalo ingxelo izakuba ukubuyisela isiqinisekiso, apho ngaphambili kokuba ufumane kwi-wagunyazisa imizimba ye Kwakhona. Enye nkqubo foreseen kuba Ukrainians wishing ukuze ufumane imvume yokuba ngumhlali kule isirashiya